Voasambotra tetsy Ivandry: nidoboka avy hatrany eny Tsiafahy i ”Eddy bois de rose” | NewsMada
Taorian’ny fisamboran’ny polisy azy, nanaitra ny maro, tetsy Ivandry omaly tolakandro, nidoboka avy hatrany, eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy, ilay mpandraharaha malaza, i Maminirina Jean Eddy, fantatry ny maro amin’ny hoe ”Eddy bois de rose”.
Heverin’ny olona fa resaka kidnapping indray ny niseho teny amin’ny parking La City Ivandry, omaly hariva. Nosakanana olona maromaro nanao saron-tava nitondra Kalachnikov, toy ireny hita amin’ny sarimihetsika ireny, ny fiara 4×4 roa. Polisin’ny UIR ireo nisaron-tava ireo, nisambotra olona teny an-toerana. Nanakana fiara 4×4 raitra miisa roa, ary namoaka ny olona tao anatiny nampatoriana teo ivelan’ny fiara. Raikitra ny fisavana ireo olona ireo, ny sakaosy sy tao anatin’ireo fiara 4×4 roa ireo. Nentin’ny polisy avy hatrany kosa ny olona iray niaraka tamin’ny harona solefanina miloko mavo.
Araka ny fanazavana azo avy amin’ny polisy, i Maminirina Eddy io nosamborina teny Ivandry io. Voalazan’ny mpitandro filaminana hatrany fa noho ny “Raharaha bois de rose” izao hetsika natao izao, ary fanatanterahana ny didy fampisamborana navoakan’ny Cour special bois de rose, efa tamin’ny taona 2013, izany. Mbola nisy ihany koa ny famoahana didy fampisamborana navoakan’ny Bianco tamin’ny septambra 2017, nosoniavin’ny tale jeneraly, Andriamifidy Jean Louis. Fantara fa naterina eny Tsiafahy avy hatrany i Eddy Maminirina, omaly hariva ihany.
Nitsoaka tany Sina
Nitsoaka tany Sina i Maminirinana Eddy ny taona 2013, rehefa nokarohina. Nandritra ny Tetezamita tena nampalaza azy ity, nahatonga ny anaram-bosotra ho “Eddy bois de rose”. Anisan’ny nahatrarana “bois de rose” ny sambony tany amin’ny faritra Analanjirofo. Tsy voasambotra mihitsy izy tamin’izany Tetezamita izany, nialokaloka tamin’ny fikambanana Tanora ho an’ny fampandrosoana eto Madagasikara na AJDM. Navoakan’ny Praiminisitra Beriziky ny anarany tamin’ireo lisitry ny mpanondrana andramena eto amintsika. Nandritra ny fitondrana Rajaonarimampiana ny tsy nahitana azy intsony. Raha vao niova anefa ny teo amin’ny fitantanana ny primatiora, ny faramparan’ny taona 2018, nialoha kelin’ny fifidianana, niverina an-tanindrazana ny lehilahy. Fety nakotrokotroka mihitsy ny tany Toamasina tamin’ny fitsenana azy.
Nanomboka teo, heno indray ny resaka fanondranana andramena. Voalaza aza fa nisy fifandraisany amin’ilay sambo Flying tratra tany Analanjirofo farany teo izy io. Izao voasambotra izao, ary miandry ny tohin’ny raharaha ny rehetra.